Elu guzobere dobe akara akara Factory, suppliers - China Elu ugwu n'ịnyịnya ala ala akara Manufacturers
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-B12
GF-B12 Mpụga-n'ịnyịnya ala akara na-adabara post-mmezi oru. Ọ bụrụ na etinyere ọnụ ụzọ ahụ, ọ kwesịrị ịgbakwunye mkpuchi ụda, mkpuchi okpomọkụ, igbochi ájá na ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị mfe ma dị mfe iji wụnye n'elu ala ụzọ; ọdịdị ahụ mara mma. • Ogologo ： 380mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ：RRepụ ihe mkpuchi aluminom alloy, wụnye ya na kposara, wee kpuchie ya • Plun ...
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-B01
GF-B01 Ihe nkedo n'elu ala dabara adaba maka oru ndozi. Ọ bụrụ na etinyere ọnụ ụzọ ahụ, ọ kwesịrị ịgbakwunye mkpuchi ụda, mkpuchi okpomọkụ, igbochi ájá na ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị mfe ma dị mfe iji wụnye n'elu ala ụzọ; a na-ekpuchi ebe nrụnye nke akụkụ ahụ siri ike nke ngwaahịa ahụ site na ihe ịchọ mma, nke dị larịị ma mara mma. • Ogologo ： 380mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha / ọla / gol ...
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-H1001
GF-H1001 Ọ bụ ihe na-akpaghị aka kemeghi ike na-azọpụta sealer. Ngwaahịa ahụ nwere ngwa na-agbanwe agbanwe yana ahịhịa. A ga-edozi ahịhịa ahụ na-akpaghị aka dịka ịdị elu nke ala ahụ iji dozie ala iji nweta mmetụta akara kacha mma ma belata uwe nke ahịhịa. • Ogologo ： 440mm-1500mm • Oghere akara ： 1mm-5mm • Emecha coating Mkpuchi ọcha • Idozi ： rewghasa na ntinye onwe gị • Akara ： ahịhịa, nwa
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-B092-1
GF-B092-1 Iji chekwaa ọrụ nke ịkọ ahịhịa ala na ọnụ ụzọ ahụ, emebere ngwa B092-1 ngwa dobe akara nke ọma. Naanị mee ka ọnụ ụzọ ahụ dị mkpụmkpụ site na 34 ~ 35mm mgbe ị na-emepụta, ma dozie eriri ala nke ọnụ ụzọ na-akpaghị aka site na nku abụọ ahụ nwere kposara. Ọrụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka GF-B092, eriri akara ahụ na-ebili na-akpaghị aka, na eriri roba enweghị esemokwu na ala. • Ogologo ： 330mm ~ 1500mm ， • Common nkọwa ： 510mm ， 610mm ， 710mm ...
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-B03-1
GF-B03-1 Iji chekwaa ọrụ nke ịkọ ahịhịa ala n'ọnụ ụzọ, emepụtara ngwa B03 gbadata akara ala ka emepụtara n'ụzọ pụrụ iche. Naanị mee ka ọnụ ụzọ ahụ dị mkpụmkpụ site na 34 ~ 35mm mgbe ị na-emepụta, ma dozie eriri ala nke ọnụ ụzọ na-akpaghị aka site na nku abụọ ahụ nwere kposara. Ọrụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka B03, ihe nkedo akara ahụ na-ebili na-akpaghị aka, na eriri roba enweghị esemokwu na ala. • Ogologo ： 330mm ~ 1500mm ， • Common nkọwa ： 510mm ， 610mm ， 710mm ， 810mm ...
Elu n'elu ugwu dobe ala akara GF-B042
GF-B042 Ezubere maka ọnụ ụzọ dị arọ, ọ nwere ike itinye ya ma ọ bụ tinye ya n'èzí. Ogwe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịdị n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Enwere ike imeghari ya imeghe ọnụ ụzọ aka nri ma ọ bụ aka ekpe. A na-ejikarị ya eme ihe maka ọnụ ụzọ na-achọ mkpuchi mkpuchi dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwupụta ụlọ ọrụ. Maka ntinye nke ọkara, dobe elu nke 44mm na ala nke ọnụ ụzọ ahụ, tinye ngwaahịa ahụ, ma dozie ya na nku ya na kposara. • Ogologo ： 450mm-2300mm • Oghere akara ： 3mm-15mm。 • Fini ...